वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : आधुनिक जापानको इतिहास
अघिल्लो किताब भ्याएपछि मैले चेखोभका केहि कथाहरुको संग्रह A Woman's Kingdom and Other Stories शुरु गरेको थिएँ। त्यो आधी जति पढेपछि, राम्रो लाग्दा-लाग्दै पनि, साहित्यइतर विषयका केहि किताब पहिला पढ्ने विचारले त्यसलाई फिर्ता गरेर अरु किताब खोज्न थालें। खासमा म कुनै नयाँ शहर बसाऊने-योजना गर्ने वा कुनै पूरानो शहरको योजनाबद्ध पुनर्निर्माण गर्ने कुरासंग सम्बन्धित केहि पढ्न चाहन्थेँ। त्यो विषयको प्राविधिक पक्ष होईन, फरक क्षेत्रको विद्यार्थी भएकोले मैले त्यति बुझ्ने कुरो पनि भएन, म शहरको निर्माण-पुनर्निर्माणको दार्शनिक र सौन्दर्यशास्त्रीय धारणाहरु पढ्न चाहन्थें। त्यस्तो किताब भेटिएन, तर त्यहि क्रममा यसमा आँखा लाग्यो। यो जापानको १८६८ पछिको इतिहासमा केन्द्रित रहेछ।
जापानमा औपचारिक रुपमा शोगुनतन्त्र (र त्यससंगै सामन्तवादी सामजिक/आर्थिक/राजनीतिक प्रणाली) समाप्त भएको सन् १८६८ को वर्षबाट यताको समयलाई जापानको आधुनिक काल मानिन्छ। यो पुस्तकमा सन् १८५० पछिको कालखण्डलाई बिस्तृत रुपमा केलाईएको छ, साथमा त्यो भन्दा पहिलाको समग्र जापानी इतिहासलाई पनि पुस्तकको प्रारम्भिक अंशमा संक्षिप्त तर सारपूर्ण रुपमा चर्चा गरिएको छ।
अहिले फेरि एकचोटि जापानको इतिहासको बारेमा लेख्ने विचार होईन मेरो, यो किताब पनि मन परेकोले थोरै चर्चा गर्ने जमर्कोमात्रै हो। जापानको बारेमा रुचि भएका र किताब खोजिरहेका साथीहरुलाई एउटा सन्दर्भ-सामाग्री होला यो भन्ने आशा छ मेरो। फेरि आफूले पढेको किताबको अभिलेख ब्लगमा राख्नुपनि राम्रै काम हो।
इतिहासकार Richard Storry ज्यूको प्राज्ञिक जीवन जापानमै शुरु भएको र धेरै जापानमै बितेको रहेछ। यसैलेनै होला, उहाँको लेखनमा प्रष्ट आत्मविश्वाश झल्किन्छ। वर्णित ऐतिहासिक घटनाक्रमहरु अघिल्लोमा जस्तै छन्, दुबै किताबको शैली पनि उस्तै लाग्यो मलाई। तर "आधुनिक जापानको इतिहास" मा घटनाक्रमहरुलाई, समय लिएर मीहिन रुपमा केलाईएको छ। जापानी समाजका परीवर्तन, राजनीतिक उथलपुथल र संकटहरुलाई आफ्नै आँखा अगाडि देखिरहेझैं लाग्ने गरी पेश गरिएको छ। बिभिन्न कालखण्डका प्रभावशाली ब्यक्तिहरुका स्वभावका सकारात्मक-नकारात्मक पक्षहरुको पनि ब्यापक चिरफार गरिएको छ।
किताब सन् १९६० ताकाको एउटा काल्पनिक जापानी परिवारको बेलुकीको खानापछिको दृश्यबाट शुरु हुन्छ। परिवारमा हजुरआमा, आमा, बाऊ, छोरा र छोरी छन् र तिनको मानसिकतामा देखिने भिन्नताको चर्चा गरिएको छ। दोश्रो विश्वयुद्ध र अझ पहिलो विश्वयुद्धभन्दा पनि पहिलाको जापान सम्झेर बस्ने हजुरआमा, दोश्रो विश्वयुद्धको विभिषिकापछि जापान बनाएको मेहेनती कर्मवीर बाऊ, सामजिक-राजनीतिक रुपमा आफ्नो लोग्नेभन्दा धेरै उदार आमा, मार्क्सवादी चिन्तनको प्रभाव परेको छोरो र पप-संस्कृतिमा रमाएकी छोरी- यिनीहरु बीचको वैचारिक द्वन्द्वलाई तत्कालीन जापानी समाजको प्रतिविम्बको रुपमा देखाईएको छ र त्यसको पृष्ठभूमिका रुपमा जापानी इतिहासको अध्ययन गरिएको छ। किताबको पहिलो संस्करण १९६० मा निक्लेकाले बढी चर्चा त्यतिबेलासम्मकै छ, तर पछिका संस्करणहरुमा संक्षिप्तनै भएपनि त्यसपछिका घटनाक्रमहरुलाई पनि समेटिएको छ। मेरो हातमा परेको सन् १९८२ को पाचौँ संस्करण हो।
किताबभित्रैबाट केहि झलकहरु अब।
१) पृष्ठ ३१ मा, जापान र जापानीहरुको मूल चरित्रलाई परिभाषित गर्ने क्रममा Storry ज्यू लेख्नुहुन्छ;
"---we can perceive that characteristics of the Japanese that has been active whenever they have been brought into contact withacivilization differing from their own; namelyaquite indefatigable curiosity,apassion to learn, and an aptitude for choosing, borrowing, adapting, and 'japanizing' foreign ideas and techniques." जापानको विशेषता र जापानको आधुनिक सफलताको रहस्य पनि यहि हो।
२) माथि १ मा उल्लेख गरिएको अवधारणाकै आधारमा उन्नाईसौं शताब्दीको चीनसंग तत्कालीन जापानको तुलना गरिएको छ एक ठाऊँमा। चीन सजिलै पश्चिमीहरुको दबदबामुनि पुग्यो, जापान भने १८६८ पछिको दुई दशकमै पश्चिमी शक्तिहरुलाई चुनौती दिनसक्ने भयो, जापानीहरुको अरुबाट निरन्तर सिक्ने र अरुभन्दा दक्ष भएर निक्लने तत्परतालाईनै यो भिन्नताको कारण भनिएको छ।
"---The nervous, hearty gathering of foreigners who formed the merchant community of Yokohama, and later Kobe, was watched and studied by the Japanese with eyes that might be hostile or envious or admiring, but which were invariably alive with curiosity. Form among the Japanese there has never been the disdainful indifference that has often characterized the Chinese attitude towards foreigners. The Japanese have never been too proud to learn."
३) आधुनिक जापानको सबैभन्दा ठूलो गल्ती दोश्रो विश्वयुद्धमा होमिनुलाई देखाईएको छ। यसको कारणको रुपमा १९२० तिरबाट शुरु भएको जापानी समाजको सैनिकीकरण र राजनीतिमा सेनाको चरम हस्तक्षेपलाई लिईएको छ। १९३० को दशकको मध्यदेखि जापानले दोश्रो विश्वयुद्धमा आत्समर्पण गरुञ्जेलसम्म जापानमा वास्तवमा सैनिक-शाशन थियो। जापानी नश्लवाद र सम्राटको नाममा सैन्य-नेतृत्वले देश चलाएको थियो।
"The Pacific War" शीर्षकको अन्त्यमा Storry ज्यू लेख्नुहुन्छ;
"So endedawar of peculiar savagery. Japan would never have entered it had the armed forces kept out of politics, or, failing this, if the army had been content to allow the Foreign Ministry - its quality was impressive - unimpeded control of the handling of Japan's relations with China and the west during the 1930s. ------ Thoughtful, imaginative, politically gifted, and sophisticated officers were overshadowed, therefore, by narrow-minded bigots, prisoners of their own neo-samurai mntality. These men, it must be said, brought the good name of Japan into disrepute throughout Asia; and they very nearly destroyed for ever the monarchy and the state they were pledged to serve."
४) लडाईँमा निरन्तर हार बेहोरिसक्दा र जनताको जीवन असहनीय कष्टकर भईसक्दा पनि सैन्य-नेतृत्व आत्समर्पण नगर्ने मनस्थितिमा थियो। उनीहरु, अमेरिकीहरु जापानी भूमिभित्रै पसेपछि पनि लडिरहने मनस्थितिमा थिए। १९४५, अगष्ट ६ मा अमेरिकाले हिरोशिमामा अणुबम खसालिसकेपछि पनि लडाईँको बारेमा जापानको तत्कालीन सैन्य-नेतृत्वले देखाएको अन्यमनस्कता र जापानी जनताको कष्टप्रतिको संवेदनहीनता देख्दा छक्क पर्छ जो कोहि पनि। अगष्ट ९ मा नागासाकीमा अर्को अणुबम खसिसकेपछि पनि लडाईँ जारी राख्ने मनस्थितिमा थियो सैन्य-नेतृत्व। तत्कालीन जापानी सम्राट हिरोहितोको हस्तक्षेपपछिमात्रै युद्धअन्त्य सम्भव भएको रहेछ। विनाशर्त आत्मसमर्पण गर्ने निर्णय १४ अगष्टको राति गरिएको रहेछ र निर्णयसंगै सम्राटले जापानी जनताको नाममा सन्देश रेकर्ड गराएका रहेछन्, भोलिपल्ट रेडियोमा बजाउनका लागि। रेकर्ड बजाईनुअगाडिका १२ घण्टामा सेनाभित्रको लडाईँ अन्त्य गर्न नचाहने एउटा सानो समूहले विद्रोहको असफल प्रयास समेत गरेको रहेछ। उक्त समूहले दरबार घेरेर उक्त रेकर्ड खोजेपनि भेट्न भने सकेनछ। त्यो समूह सम्राटले रेकर्ड गरेको सन्देश नष्ट गर्न र आवश्यक परे सम्राटका नाममा सम्राटलाईनै 'सिध्याएर' भएपनि युद्ध जारी राख्ने योजनामा रहेछ।
५) दोश्रो विश्वयुद्धमा पूरै जापान अमेरिकी बमवर्षाले ध्वस्त भएको थियो, तर एउटा प्रमुख शहर क्योटोलाई भने बमबारीले बिल्कुलै छोएको थिएन। छ वर्ष पहिला क्योटो घुम्न जाँदा हाम्रा निमन्त्रक जापानी बाट पहिलो पटक सुनेको थिएँ मैले यो कुरा। संयोग मात्रै होला भन्ने ठानियो त्यतिखेर र अरु कारण सोध्नेतिर लागिएन। मनको एउटा कुनामा भने क्योटोमा भएका धेरै बौद्ध-मन्दिरहरुको रहस्यमय 'आध्यात्मिक' प्रभाव पनि हुनसक्छ भन्ने विचारले घर बनाएको थियो त्यतिखेर। यो पुस्तकमा पनि त्यो प्रसंग छ। क्योटो जोगिनुमा बोष्टोन म्युजियमका क्युरेटरको हात रहेको मानिँदो रहेछ। त्यो प्रसंगका बारेमा किताबबाटै अलिकति लेखौं;
"----Forty percent of the built-up area of more than sixty cities and towns was destroyed----presented the spectacle of charred wood and ashes with scarcelyabuilding standing. ----Among the largest cities only Kyoto was untouched-thanks, so it was said, to persistent representations in Washington by the Curator of the Boston Museum of Fine Arts."
विकिपेडियामा भने तत्कालीन अमेरिकी युद्ध मन्त्री (Secretary of War) Henry L. Stimson लाई दिईएको छ क्योटो जोगाउने श्रेय। दुबै सही पनि हुनसक्छ, बोष्टोन म्युजियमका क्युरेटरबाट क्योटोका बारेमा जानेका हुनसक्छन् ती युद्ध मन्त्रीले। जसका कारण यो निर्णय सम्भव भयो, ती धन्यबादका पात्र हुन्। क्योटो शहर सधैंभरिका लागि जोगाईराख्नुपर्ने, मानवजातिको अमूल्य सम्पदा हो।
६) र अन्त्यमा Storry ज्यूले जापानी चरित्रको बारेमा दिनुभएको संक्षिप्त तर सूक्ष्म र सटीक विश्लेषण;
"---For all their formalism they are an exceedingly competitive people. They make loyal friends, as staunch as any in the world, tireless rivals and determined enemies. With bouts of intense and, at times, quixotic sentimentality they combine an emotional realism that makes them resemble the French perhaps more than any other European race; and indeed France has long enjoyedapeculiarly high reputation among the Japanese. This has been the result, it must be said, of French excellence in the arts.
यो (र अघिल्लो पनि) किताबबाट म एकदम प्रभावित भएको छु। विना कुनै पूर्वाग्रह लेखिएको एउटा इतिहासको पुस्तक पढ्नुजति रोमाञ्चक अरु केहि पढ्नु हुँदैन जस्तो लाग्न थालेको छ मलाई अचेल।
यो पुस्तकको अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको सन्दर्भ-स्रोतहरु प्रशस्त दिईएका छन् हरेक खण्डमा। किताबको अन्त्यमा जापानको बारेमा लेखिएका अंग्रेजी किताबहरुको १० पेज लामो सूचि पनि दिईएको छ। त्यहि सूचिबाट छानेर A Short Economic History of Modern Japan भन्ने अर्को किताबको 'बाली' पकाउन पनि शुरु गरेको छु, मेसो परे त्यस बारेमा पनि केहि लेखौंला पछि।
Posted by Basanta at 12:04 AM
RRijal June 4, 2010 at 3:34 AM
३ नं बुँदाको Narration पढ्दा आकाशबाट हिजो-आजको नेपाल हेरे जस्तो लाग्दै थियो । धन्यवाद बाँड्नु भएकोमा ।
जापान अनौठो विषय छ, म चाहिँ टेलि शृङ्खला र फिल्म खोजी खोजी हेर्छु । तपाईँको पहिलो लेख पढे पछि Yunagi no machi sakura no kuni डाउनलोड गरेर राखेको छु तर English Subtitles नपाएर त्यतीकै छ । जापानी भाषा Arighato gozaimasda बाहेक केही आउँदैन ।
जापान सम्बन्धित अनि तपाईँको प्रस्तुत शैली, म त अर्को कहिले आउला भनेर बसेको छु है । फेरी पनि धन्यवाद !
दीपक जडित June 4, 2010 at 9:50 PM
वसन्तजी, हामीले अलि रमाईलो र अलि जानकारी बटुल्ने हो तपाईंका यसप्रकारका लेखहरु पढेर । साँच्चै गहिरो चाख राखेर जापानको बारेमा लेख्नुहुने तपाईंको भविश्यमा यस्तै सम्बन्धि यौटा पुस्तक निस्किएको देख्न र पढ्न पाउँ ।
अरुणेश मिश्र June 7, 2010 at 3:56 AM
Dilip Acharya June 7, 2010 at 2:35 PM
हुन त यसै पनि जापानको बारेमा आफुलाई एकदमै कम कुरा मात्रै थाहा भएकोले यो पोस्टबाट मलाई पनि केही कुरा थाहा मिलेको जस्तो लाग्यो।
विशेषत हिरोशीमा र नागासाकीका बम आक्रमण पछिका जापानी सेनाभित्रका तथ्य र सम्राटलाई सिध्याएरै भएपनि यु्द्ध गर्न तम्सने जमातको पाटो र क्योटो बचेको कारणहरु अझ रोचक लागे ।
राजेश नतांश June 7, 2010 at 9:13 PM
सार्है जानकारीमूलक लाग्यो हजुरको यो पोष्ट । पुरानो पोष्ट पनि सरसर्ती पढेँर सक्काए । जानकारीमूलक पोष्टका लागि धन्यवाद यो सौभाग्य दिनुभएकोमा एकचोटी फेरी बसन्त दाईलाई ।
दूर्जेय चेतना June 8, 2010 at 2:26 AM
मलाई पनि निकै जानकारी मुलक लाग्यो। बास्तबमा भन्नेहो भने यही भएर पनि धेरै कुराहरु जान्न र बुझ्न बाकि छ।
सिर्जनाहारू June 9, 2010 at 1:21 AM
जापानको बारेमा लेखिएको यो आलेख सारै उपयोगी र जानकारीमूलक लाग्यो !!
Chaitanya June 10, 2010 at 11:12 PM
निकै ओजपूर्ण विश्लेषण रहेछ | सबै कुरा सहि हो जस्तो लाग्यो |नजानेको बिषय सिक्ने कुरामा यहाँका मान्छेको लगन अचम्मैको छ |
Dhruba Panthi June 14, 2010 at 8:59 PM
जापानको इतिहासका बारेमा बाँड्नुभएका थप जानकारीहरु झन् उपयोगी लागे। तपाईंको नयाँ 'बाली' का बारेमा पनि चाँडै नै पढ्न पाउने आशा छ।
Basanta June 17, 2010 at 12:08 PM
यहाँहरु सबैलाई हार्दिक धन्यबाद! जापान बारेका पुस्तकहरु अरु पढियो भने अबश्य पनि जानकारी बाँडनेनै छु।
RRijalजी, वर्तमान जापान र जापानी समाजको वास्तविक चित्र हेर्न चाहनुहुन्छ भने Shall We Dance भन्ने जापानी फिल्म पनि हेर्नुहोला। यहि फिल्मको आधारमा अंग्रेजी फिल्म पनि बनेको छ तर जापानीजत्तिको सशक्त त्यो छैन। युट्युबमा हेर्नका लागि पहिलो भागको लिंक यो हो; http://www.youtube.com/watch?v=262n5YHSvz8&feature=related